RW Rooble oo Baarlamaanka Soomaaliya hortegaya 9-da Febraayo | Xaysimo
Home War RW Rooble oo Baarlamaanka Soomaaliya hortegaya 9-da Febraayo
RW Rooble oo Baarlamaanka Soomaaliya hortegaya 9-da Febraayo
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaaca ka qaaday in maalin kadib sideeda bishaan February oo ku beegan muddo xileedka madaxweynaha uu hortegi doono baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale la filayaa in ra’iisul wasaaraha uu khudbadiisa ku soo qaado xaaladda dalka, gaar ahaan doorashooyinka dalka oo dib uga dhacay waqtigii loo asteeyey, taas oo loo xil saaray in xukuumaddiisa ay hirgeliso, kana shaqeyso doorasho xor iyo xalaal ah.
“Wuxuu ahaa weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliyeed ee bir ma geydada ah. Cadowgu way sii daciifayaan, taag darradooda ayaana sabab u ah weeraradan quusta ah,” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliiya Maxamed Xuseen Rooble.
Hadalkan ka soo yeeray ra’iisul wasaaraha dalka ayaa wuxuu ku soo aadayaa, iyada oo horey madaxweynaha Soomaaliya uu shir ballaaran isugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, kaas oo dhacaya 5-ta bishan, kadib shirka magaalada Samareeb.